Isabel Allende: Biography na akwụkwọ kacha mma | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Were dị ka otu n'ime ndị edemede ukwu nke ụwa Latin America, Isabel Allende (Lima, August 2, 1942) biri oge ka ukwuu na nwata na Chile nwere nsogbu nke a manyere ya ịgbanahụ na 1973. Ọ bụ mgbe ahụ ka ndọrọndọrọ ọchịchị, nwanyị ma ọ bụ ezigbo anwansi wee bụrụ isiokwu pụtara ugboro nke a na-asụ akwụkwọ ọgụgụ nke gụnyere e rere ihe ruru nde 65, na-eme Allende onye edemede kachasị agụ akwụkwọ n'asụsụ Spanish. Na biography na akwụkwọ kacha mma nke Isabel Allende ha kwadoro ya.
1 Biography nke Isabel Allende
2 Akwụkwọ kacha mma Isabel Allende dere
2.1 Oflọ Mmụọ
2.2 Nke Lovehụnanya na Onyunyo
2.5 Ines nke mkpụrụ obi m
Biography nke Isabel Allende
Dee ihe ekwesighi ichefu
Site na agbụrụ Spanish, ọkachasị Basque, a mụrụ Isabel Allende na Peruvian Lima, obodo ebe e zigara nna ya n'oge ọrụ na Embassy nke Chile. Mgbe nne na nna ya kewara mgbe ọ dị obere afọ 3, nne ya laghachiri na ụmụ ya na Chile iji jikọta usoro ndị ọzọ bi na Lebanọn ma ọ bụ Bolivi, rue mgbe Allende laghachiri Chile na 1959.
Ọ lụrụ di ya mbụ, bụ Miguel Frías, na 1963, n'otu afọ ahụ ka a mụrụ nwa ya nwanyị bụ Paula. Nwa ha nwoke nke abụọ, Nicolás, amụrụ na 1967. N’afọ ndị Allende biri na Chile rụrụ ọrụ na Food and Agriculture Organisation nke United Nations (FAO), na chanel telivishọn abụọ dị na Chile, dịka onye na-ede akụkọ ụmụaka na ọbụnadị onye na-ede ihe nkiri. N'ezie, ọrụ ikpeazụ ya, asaa enyo ahụ, pụtara obere oge tupu Allende na ndị ezinụlọ ya hapụrụ Chile na 1973 mgbe ọchịchị Pinochet nwụsịrị. Na 1988, mgbe ọ gbara alụkwaghịm Miguel Frías n'ihi ọtụtụ njem ndị bidoro n'oge ihe ịga nke ọma nke akwụkwọ mbụ edepụtara (La casa de los espíritus or De amor y de sombra), Allende lụgharịrị, nke a na onye ọka iwu Willie Gordon, na San Francisco, inweta nwa amaala America na 2003 mgbe afọ iri na ise biri na mba North America.
Ndụ Allende akara site na nkwarụ, njem na ngosipụta dị oke egwu dịka ọnwụ nke nwa ya nwanyị bụ Paula, onye nwụrụ mgbe ọ dị afọ 28 na ụlọọgwụ dị na Madrid n'ihi ịba ọgaranya nke mere ka onwe ya pụọ. Site na nsogbu a siri ike ka amụrụ otu n'ime akwụkwọ mmetụta ya, Paula, nke sitere n'akwụkwọ ozi onye edemede dere maka nwa ya nwanyị. Ihe omuma atu nke gosiputara udiri Allende imeputa akuko site na ihe omuma ya nke emesiri megharia. Ihe si na ya pụta bụ eluigwe na ala nke akara anwansị nke sitere na ọganihu Latin America, kamakwa ọganihu na-egosi site na ịde ederede siri ike karị na ịlaghachi n'eziokwu.
N'oge ọrụ ya niile, Isabel Allende rerela ihe ruru nde akwụkwọ 65 nke atụgharịrị gaa n'asụsụ 35 dị iche iche wee merie Onyinye dika Chile National Literature Prize na 2010 ma obu Hans Christian Andersen na 2011.
Ọrụ mbụ nke Allende amụrụ site n'akwụkwọ ozi onye edemede dere maka nna nna ya, 99, si Venezuela na 1981. Ihe ga - emesị bụrụ akwụkwọ akụkọ na - ekwu banyere aghụghọ na nzuzo nke ọgbọ anọ nke Trueba, otu ezinụlọ sitere na Chile mgbe ọchịchị gachara. Ghọọ otu Edemede kacha mma mgbe edechara ya na 1982, Oflọ Mmụọ o nwere otutu ihe anwansi anwansi a nke bu ihe omimi nke ndi mmuo ochie na etinye aka na onodu di iche iche amuru site na mgbanwe ndi mmadu na nke ochichi na Chile. E mepụtara akwụkwọ akụkọ ahụ na sinima na 1994 ya na Jeremy Irons, Glenn Close na Meryl Streep dika ndi isi kpakpando.
Nke Lovehụnanya na Onyunyo
N’etiti ọchịchịrị ahụ, ọkachasị nke na-akpọku akụkọ ihe mere eme dịka ọchịchị aka ike nke Chile, Amachibidoro ịhụnanya na-aghọ ihe dị ka ifuru eji eji. The premise nke Nke Lovehụnanya na Onyunyo mere akwụkwọ akụkọ Allende nke abụọ ka ọ bụrụ akwụkwọ kacha mma mgbe ebipụtara ya na 1984, ọkachasị n'ihi hypnotism nke mmekọrịta dị n'etiti Irene na Francisco, akụkọ nke onye ode akwukwo n'onwe ya debere na ya n'oge afọ ya dị ka onye mba ọzọ iji nye ụwa akụkọ na-enye obi ụtọ karịa ntọala na oge nke ya. Emegharịrị akwụkwọ akụkọ ahụ na sinima na 1994 na Antonio na Jennifer Connelly dị ka ndị na-akwado.
Scheherazade, nwa agbọghọ ahụ nke kọọrọ caliph dị mwute n'oge gara aga akụkọ otu puku abalị na otu abalị na-azọrọ na ọ bụ nwanne nwanyị Latin America ruo ọtụtụ narị afọ. Allende na-ahụ maka inye ihe Eva Luna na akụkọ ihe mere eme ya site n'oké ọhịa, ndị mmadụ na esemokwu nke South America nke olu dị mkpa iji gbanwee akwụkwọ 1987 ya na otu n'ime ike ya kachasị ike. N'ezie, akwụkwọ akụkọ ahụ malitere akụkụ nke abụọ akpọrọ Njirimara nke Eva Luna nke bụ ihe ngọpụ kachasị mma iji tinye onwe gị na akụkọ Allende dị mkpụmkpụ ma na-atọ ụtọ, nke na-abanye n'ọgba aghara ndị sitere na ncheta akụkọ ihe mere eme na ndị aghụghọ ezinụlọ.
Dabere na Allende, n'ime akwụkwọ niile o dere, Paula Ọ bụ ihe na-esighi ike na gburugburu ụwa. Tụtara ime dị ka akwụkwọ ozi nke a mụrụ site na mkpụrụedemede 180 nke onye dere dere n'oge coma nke ada ya nwa nwanyị n'ihi porphyria Ruo mgbe ọ nwụrụ na Disemba 199,2, o mere ka akwụkwọ a bụrụ ebe nkwụsị zuru oke na akwụkwọ ọgụgụ onye edemede. Otu akụkọ na-agbawa obi na mmekọrịta chiri anya nke nne na-atụ egwu ịnwụ nwa ya nwanyị na-atụgharị ndụ ya ma na-arụ ọrụ na-ejidesi olile anya kacha nta. N'ezie otu n'ime akwụkwọ kacha mma Isabel Allende.
Isabel Allende na-enyocha akụkọ ihe mere eme na nuances ya niile dị ka ụzọ isi mepụta ntọala zuru oke maka ọrụ ya. Ezigbo ihe atụ bụ akwụkwọ a nke ebipụtara na 2006 nke na-akọghachi ọdachi nkebụ nwanyị mbụ Speni byaru lẹ Chileke: Ines, onye Extremaduran nke na-agbaso nzọụkwụ nke onye ọ hụrụ n'anya ruo mgbe ọ debanyere aha na ụfọdụ akụkọ ihe mere eme nke South America dị ka mmeri nke Chile ma ọ bụ ọdịda nke alaeze Inca.
Ọ ga-amasị gị ịgụ Ines nke mkpụrụ obi m?
Gini bu akwukwo kachasi nma nke Isabel Allende?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » Isabel Allende: Biography na akwụkwọ kacha mma
George Simenon: Ndụ nke Akwụkwọ na Mmekọahụ.